Isbaheysiga nabada Soomaaliyed oo dhaliilay madaxda dowlada Somalia, talooyina u soo jeediyey
Mogadishu Arbaco 5 December 2012 SMC
Gudoomiyaha Isbaheysiga nabada Soomaaliyeed siyaasiga C/llaahi Shiikh Xasan oo maanta shir jaraaid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dhaliilo kala duwan oo ku saabsan dhinacyada siyaasada, amaanka iyo arrimaha bulshada u soo jeediyey dowlada Somalia isagoo dhinaca kale u soo bandhigay talooyin.
C/llaahi Shiikh Xasan ayaa intaa ku daray in Isbaheysiga Nabada Soomaliyeed markii uu arkay xaalada dalku marayo ee dhinacyada Amniga, siyaasada dibada iyo tan gudaha, markii uu arkay karti darada Madaxda talada la wareegtay ee looga fadhiyay iney isbedel keenaan uu go’aansaday inuu farta ku fiiqo qaladaadka jira si loo saxo.
“Madaxweynaha waxaa uu kursiga ku tegay 4.5 iyo doorasho Baarlamaani ah ee kuma imaan nidaamka asxaabta badan waxaa nasiib daro ah in ragga hadda xubnaha ka ah xukuumada ay u badan yihiin hal xisbi taasna waa qalad loo baahan yahay in la saxo” ayuu intaa ku daray C/llaahi Shiikh Xasan. Dhinaca kale, Siyaasiga C/llaahi Shiikh Xasan ayaa shirkiisa jaraaid ku sheegay in amaanka goobaha ay dowladu gacanta ku heyso uu soo xumaaday wixii ka dambeeyey markii isbedelka siyaasadeed uu ka dhacay dalka. “Illaa hadda ma jiro qorshe amaanka la xiriira oo dowladu soo bandhigtay, waxaana la marayaa in saddex wasiir gaar ahaan kuwii amniga qaabilsanaa sida wasiirkii arrimaha gudaha iyo Gaashaandhiga oo Marko tegay lagu weeraray jidka ayna sababtay in ay ku soo laaban waayaan xamar, dayuurad Helicobter ahna lagu soo qaaday, sidoo kale xalay waxa madaafiic dhacayey waan maqleynay, waxaad moodaa iney luminayaan madaxda fursad gacantooda gashay oo dhiig badan uu u soo daatay” ayuu yiri C/llaahi Shiikh Xasan.
Gudoomiyaha Isbaheysiga nabada ayaa dhinaca kale sheegay in madaxda dowladu ay waxba ka oran waayeen talaabadii Kismaayo looga soo celiyey wafdi ay halkaas u direen taasoo uu sheegay iney aheyd guul daro siyaasadeed oo weyn.
“Waxaa gacanta ka baxay qeybo badan oo dalka ka mid ah; sida Jubooyinka oo ay gacanta ku heyso dowlada Kenya iyo Jabhada Raas-kambooni oo aan dowladda ka mid aheyn. Shabaab waxay aheyd Jabhad, jabhad, kale ayaana hadda meesha saameyn ku leh arrintaas waa arrin khatar ku ah midnimada Soomaaliya iyadoo aan ognahay in 9-kii November laga soo celiyey Kismaayo wafdi dowlada federaalka ah u dirtay dowladuna arrintaa si cad ugama hadlin, marka waa iney kala cadeeyaan Kismaayo in Kenya lagu daray iyo in kale” ayuu intaa ku daray C/llaahi Shiikh Xasan.
Gudoomiyaha Isbaheysiga nabad Soomaaliyed C/llaahi Shiikh Xasan ayaa talaabo wanaagsan ku tilmaamay isbaarooyinka ay dowladu ka qaaday jidadka hase ahaatee ay muuqato inuusan jirin qorshe amni oo ciidamo la isku haleyn karo lagu geynayo goobihii laga qaaday.
“Dowladu waxey baabi’isay isbaarooyinki yiilay qeybo ka mid ah Muqdisho, waa talaabo wanaagsan oo loo baahnaa laakiin waxaa muuqata inuusan jirin qorshe loogu talagalay amniga goobihii laga qaaday isbaarooyinka oo aan la dhigin ciidan amniga ilaaliya si uusan u iman (Security Vacuum) sidoo kale ma jiro qorshe lagu dhaqan celinayo maleeshiyooyinkii isbaaradu u tiilay” ayuu yiri C/llaahi Shiikh Xasan.
Gudoomiyaha Isbaheysiga nabada Soomaaliyed ayaa ugu dambeyn u soo jeediyey madaxda dowlada iney sharciga ku saleeyaan talaabooyinka ay qaadayaan, isla markaana ilaaliyaan inaan lagu xad gudbin dadka iyo dalka bulshadanan ugu adeegaan cadaalad iyo daacadnimo aysana luminin fursada dowladnimo ee hadda ay Soomaalida ku horkacayaan.